DVB TV – မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ကလပ်ပေါင်းစုံနဲ့ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲ
941 January 15, 2017
DVB TV – မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ကလပ်ပေါင်းစုံနဲ့ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမ ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လင်းဆက်အောင်ကပေးပို့။
DVB TV – ၂၀၁၅ စင်ကာပူဆီးဂိမ်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကျော်ဖို့တောင် ရုံးကန်ရမယ်
1461 January 8, 2017
DVB TV – ကစားသမား မျိုးဆက်ပြတ်သွားတာကြောင့် ၂၀၁၅ စင်ကာပူဆီးဂိမ်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကျော်ဖို့တောင် ရုံးကန်ရမယ်လို့ နေပြည်တော် အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း တာဝန်ခံ က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို ထက်လူပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV – နိုင်ငံပေါင်း ၄၁နိုင်ငံက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ရိုးမမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ
1237 January 8, 2017
DVB TV – နိုင်ငံပေါင်း ၄၁နိုင်ငံက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ရိုးမမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထောက် ဟေမာဝင်းက တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DVB TV – UAB ဘဏ်ကနေ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်စပွန်ဆာရတာဟာ အသင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကိုမြင့်တက်စေတယ်
1327 January 7, 2017
DVB TV – UAB ဘဏ်ကနေ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်စပွန်ဆာရတာဟာ အသင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကိုမြင့်တက် စေတယ်လို့ ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုလွှမ်းမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါ တယ်။
DVB TV – ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လူငယ်တွေအတွက် အလွတ်တန်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
1037 January 7, 2017
DVB TV – ကလေးမြို့မှာ ပထမဆုံးစိုက်ထူလိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လူငယ်တွေအတွက် အလွတ်တန်း ဘောလုံးအားကစား ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်သွားပါတယ်။. ဒီသတင်းကို ဒေါ်လေးလေးမွန်ပေးပို့ထာါးပတယ်.
အထက်မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ် ဒီဂရီ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ ကာယဗလ မောင်မယ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
1277 January 3, 2017
အထက်မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ် ဒီဂရီကောလိပ် ကောလိပ်နဲ့ ပညာရေးကောလိပ် ပေါင်းစုံတို့ရဲ့ ကာယဗလ မောင်နဲ့ကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။ ငြိမ်းမိုးနောင် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV – 03.01.2016
DVB TV – မြန်မာနိုင်ငံမှာ အားကစားအဖွဲ့ချုပ် ၄၉ခုထဲက အဖွဲ့ချုပ် ၁၅ခုအမှုဆောင်အဖွဲ့ ယာယီပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
942 December 20, 2016
DVB TV – မြန်မာနိုင်ငံမှာ အားကစားအဖွဲ့ချုပ် ၄၉ခုထဲက အဖွဲ့ချုပ်၁၅ခုကျော်ရဲ့ အမူဆောင်အဖွဲ့တွေကို ယာယီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို လွှမ်းမိုးအောင်ပေးပို့ ထားပါတယ်။
DVB TV – မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့် အာရှယူ၁၉ခြေစစ်ပွဲ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း
1197 December 18, 2016
DVB TV – မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့် အာရှယူ၁၉ခြေစစ်ပွဲမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းက ပါလက်စ တိုင်းအသင်းနဲ့စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုလွှမ်းမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV – ဗီယက်နမ်ဖိတ်ခေါ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမယ်
1554 December 17, 2016
DVB TV – ဗီယက်နမ်ဖိတ်ခေါ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ မြန်မာယူ၂၁နည်းပြ ဦးကြည်လွင် ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကို လွှမ်းမိုးအောင်ပေးပို့ ထားပါတယ်။